Soo laabashada islaamka dhexdhexaadka ah – Maandoon
October 26, 2017 Faisal Hussein 0 Comment
Erayga “Islaam” macnihuusu waa “Nabad”. Eebbe ergaygiisii Muxamed waxa uu u soo diray oo kaliya in naxariistiisa uu gaarsiiyo addoomihiisa. Marka nabad iyo naxariis la isku daro waxaa soo baxaya jacayl, is dhexgal iyo wada noolaansho bulsheed oo nabad iyo naxariisi sal u tahay jiritaankooda.
Xagjirnimadu waxa ay ka soo horjeeddaa islaamka dhexdhexaadka ah ee alle soo dajiyay. Sidaa darteed qof walba oo xagjir noqdaa waxa uu ka baxayaa diintii alle ee dhexdhexaadka ahayd. Umadda islaamka ah eebbe waxa uu ka dhigay mid dhexdhexaad ah, sababtoo ah, wanaaggu waxa uu ku jiraa dhexdhexaadnimada. Diintani hadday xajir tahay madiina ma soo dhaafteen, nabi muxamed SCW iyo farriintii uu alle u soo dhiibayna nama ay soo gaarteen.
Maanta dalalka islaamka waxaa ka aloosan dab, mid muuqda oo burbur laxaadle geysanaya iyo mid aasan oo dambaska hoostiisa ka hulaaqaya. Dabkaa dadka iyo dalalka islaamka baabi’yay waxaa uu shidmay markii laga tagay dhexdhexaadnimadii diinta. Diinta waxaa laga buuxiyay nacayb badan, damac dad oo waalli ah, doonis siyaasadeed oo hadba boqorrada iyo madaxdu diinta damacooda la ekaysiiyaan, dhankay doonaanna u dhigaan iyaga oo adeegsanaya wadaaddo guulwadayaal ah oo luflufkooda ku hoos nool.
Islaamka xagjirka ah waxa uu burburiyay oo adduun iyo aakhiraba seejiyay Afgaanistaan, Ciraaq, Suuriya, Soomaaliya iyo Yaman oo iyadu maanta xabaalo isu badashay. Yaman ma ay burburin boqorro carbeed oo xukunkooda u baqay oo kaliya, macaluusha, gaajada, dhimashada iyo burburka dalkaa ka jira waxaa ka masuula wadaaddo rumaysan islaam xagjir ah oo nacaybku buuxdhaafiyay. Nacaybka wadaaddaasi u qabeen muslimiinta Shiicada ah ee tirada yar ee yaman ayaa sababay in masaakiintii Yaman ee faqrigu dillooday in la tirtiro. Wadaaddaa diinta xagjirka ah haystaa waxa ay meel walba ka iclaamiyeen in laynta reer Yaman u dhawaansho Alle iyo janno lagu helayo. Dadka ayay ugu yeereen ka qeyb qaadashada dagaalka Yaman oo ay jihaad ku sheegeen. Cid kasta oo ka hortimidna waa ay nacdaleen oo fogeeyeen.
Islaamka xagjirka ah nabad-darro iyo naxariis la aan ayuu dunida ku soo biiriyay taa oo lid ku ah diintii Eebbe ee dhexdhexaadka ahayd. Maanta cambuuro weynta Sucuudiga oo uu dabo joogo Maraykanku markii ay ka dhamaysteen islaamka xagjirka ah ee ay maalgaliyeen, boqortooyadooda yarna u yaabeen waxa ay bilaabayaan islaamkii dhexdhexaadka ahaa in ay soo nooleeyaan, kan wax qarxinaya meesha ka saaraan. Wadaaddo badan oo Soomaali ah oo kitaabadii nacaybku ka buuxay ee loo soo dhiibay islaamkii dhabta ahaa u haystay ayaa maanta la yaabban islaamkan dhexdhexaadka ah ee Sucuudigu sheegayo waxa uu yahay. Qaar badan oo yaabban ayaa leh “ma dhici doonto in islaamkii dhexdhexaadka ahaa loo laabto oo diinta (xagjirnimada) laga tago, Sucuudiga iyo cid walba oo isku daydana waa ay ku guban doontaa”! Sababtoo ah iyagu waxa ay diinta u haystaan in dadka la laayo, hooyooyinka iyo carruurta lagu jihaado oo suuqyada laysku dhexqarxiyo, in miskiin aan waxba haysan oo macaluushu dhabannadiisa ka muuqato lug iyo gacan laga jaro iyo in masaakiinta legdanka nolasha la daalaadhacaya dhaxag lagu dilo. Qofka noocaa ah agtiisa wax nabad iyo nolal ahi ma yaallaan. Cid walba oo nacaybka diidana waa uu necebyahay. Waa qof nolashiisa col la ah, qof isagu col isu ahna cidna u arxami maayo.
Aala Sucuud islaam jacayl kama aha isbadallada diinta ee ay wadaan, maantase waxaa is waafaqay dantoodii iyo danta dadka muslimiinta ah oo ka daalay manhajkan waalan ee wax uu dilo maahee aan waxba noolaynayn. Waxba yaan la eedayn reer galbeed. Xagjirku inta uu reer galbeed u gaystay waxa kumannaan jeer ka badan inta uu wax yeeleeyay dadka islaamka ah. Dunidu waa dano, dantu meeshay kula gashana waa lala galaa, maanta waxaa is waafaqay danta muslimka uu halaagay Wahaabigu iyo dantii Galbeedka. Argagixsada, nacaybka iyo gumaadka magaca diinta lagu samaynayo in xididada loo siibaa aadanaha oo dhan ayay dan u tahay. Cid walba oo wada noolaanshaha dadka ka soo horjeeddaa waa cid ka hortimi sunnada Eebbe u dajiyay kownkan, ciddaasina xaq uma leh in warkooda la dhegaysto.
Diinteennu waa nabad, naxariis, isjacayl iyo nabad ku wada noolaansho.
← Sacuudiga: Hey’adda Dib-u-eegidda Iyo Laaxintirka Axaadiista Nebiga!
Rajmigu: Xad Alle Iyo Xad Aadami Waa Kee? →
October 8, 2017 Cabdi Ismaaciil 0